(Kugcine ukubuyekezwa On: 25/12/2020)
Kepha lapho ehamba kulo iviyo bekolishi, kulungile ngokuphelele ngeke ibe uhambo futhi nje izinto ngesikhathi osithandayo. Touring endaweni kungekho okulindele noma iyiphi ukuhlela ngaphambi empeleni indlela engcono kakhulu ukuthola ingcebo efihliweyo. It ishiya zingene mnandi futhi ukuhlola uncensored. Ngakho, uqala kuphi wena nabangane bakho lapho ufuna ukwenza okutholakele okuyiqiniso ngaphandle kokwenza uhlu oluqinile lokukwenza? Ungabathola kanjani okwatholwa engcono ekhaya? Yini ongakhetha kuyo?
Ukucinga futhi ubhalise for free ukuhamba izinkambo ngosuku lwakho wokuqala edolobheni entsha. Ziyakwazi kulula ukuthola – nje cela zamalungu abasebenzi ehhotela uzobe nilala lokuqala, noma ubuze kusukela nezinye izihambi umfundi uthola ehostela yakho. Ukusesha okusheshayo kwi-inthanethi kuzokusiza nokuthi uthole okuhle uhambo lokuhamba mahhala. Qaphela ukuthi nakuba izinkambo ngokuyinhloko mahhala, kungcono ukuthi ubekele eceleni isabelozimali esincane ukuqondisa izinkomba zokuvakasha.
Uma ungafuni ukuba bahambe bodwa emigwaqweni ngaphandle kwenjongo esibekiwe, kungani abengezanga umcimbi lendawo ke? Buza azungeze i-imibuthano yezohwebo, art imibukiso, amakhonsathi, noma imikhosi futhi Gxila phi of them. Uma nithanda ezemidlalo, iya enkundleni yezemidlalo noma uye emdlalweni webhola lomgwaqo. Ungadlala ngisho ne bendawo uma ngokwanele wokungenisa izihambi. Lokhu kuzokwenza ube nombono ojulile edolobheni futhi akuvumela ukusebenzisana ne bendawo futhi uhlangabezana nokuzabalaza kwabo kwansuku zonke futhi nezinjabulo – efana lendawo. Qalisa webanga uma uthemba ukugijima ikhono lakho. Ukuncintisana bomshado yakho kuzokwenza kube mnandi nakakhulu.
ukuze uphethe, Nsuku zonke kuba ukufunda ithuba nganoma yisiphi iqembu wokuvelela abasha ekolishi abahambi. Nje ukuhlelwa okufanele yakho umshuwalense wezempilo kanye nohambo, kodwa ungazikhawuleli ohambweni oluhleliwe. Ake self yakho ukwazi abasha ukuhlola bese bethola futhi uma bathandile athikili yethu, ke oda amathikithi isitimela esuka Londoloza Isitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “Ukuhlola The Best Okutholakele Nge College Mates” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit nge isixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fdiscoveries-college-mates%2F%0A%3Flang%3Dzu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)